Thursday September 13, 2018 - 14:17:36 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ayaa sheegaya in shaqada la eryayCali Gacal Casir oo ahaa guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka isku magacaabay 'Galmudug'.
Fadhi ay xildhibaannada Baarlamaanka Galmudug ku yeesheen xaruntooda Dhuusamareeb ayay codka kalsoonida u qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka sida uu warbaahinta u sheegay Xareed Cali Xareed oo ah guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka.
Wuxuu sheegay in 147 xildhibaan ay fadhiga soo xaadireen 146 kamid ahna ay ucodeeyeen in Cali Gacal Casir xilka laga qaado waxaana isaga aamusay hal xidlhibaan sidaasna uu shaqadiisi ku waayay guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka.
Maalin ka hor ayay xildhibaannada maamulka 'Galmudug' sheegeen in ay gudbiyeen mooshin ka dhan ah guddoomiyihii baarlamaanka balse maanta ayay cod geliyeen oo xmed eryeenCali Gacal Casir, xilka qaadistan ayaa sii xoojinaysa kala qeybsanaanta u dhaxaysa maamulka Fadhiigka ah ee Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxda ka yahay.
Siyaasiyiin ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in maamulka Galmudug uu ka hortagay isku day ay xukuumadda Kheyre ku doonaysay in Maxamed Xaashi Carabeey iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay u adeegsato burburinta maamulkaasi taas oo keentay in Xaaf uu shirkii magaalada Kismaayo ka caddeeyo faragelinta uga imaanaysa dhanka Muqdisho.
Weerar Bambaano Oo Ka Dhacay Hodon iyo Howlwadaag iyo Askar lagu Dilay deegaanka Weydoow.
deg deg: Qarax Xooggan oo Goordhow Lagu Weeraray Saldhigga Iskoola Boliisiyo.